Mmemme ahụ bụ nke weere ọnọdụ n'ezinaụlọ Ezenneka dị n'Ebenator n'okpuru ọchịchị Nnewi South nke steeti Anambra, ma bụrụkwa nke e jiri òfùfè nro pụrụ iche weere ọnọdụ n'ụlọ ụka St. Matthew's Catholic Church Ebenatọr wee malite. A nọkwara na ya bụ mmemme wee merùbe ncheta ọgbụgba ahọ iri abụọ e jiri chie Rev. Fr. Donatus Iyke Ezenneka echichi dịka ụkọchukwu Oseburụwa.
Na nkenke okwuchukwu ya n'ofùfè nrò ahụ, 'Monsignor' Emma Adibe kpọkùrù ndị otu Christ ka ha nwee òkwùkwe ma kwụdosie ike na Chineke, n'ihi na ọ bụ naanị ya bụ Onye na-enye ndụ. Ọ kọwara ogologo ndụ na ahụike dịka onyinye na-esi n'ebe Chineke nọ abịara ụmụ mmadụ, ma kpọkuo onye ọbụla ka ọ kwụdosie ike na Chineke.
N'okwu mmalite ya, onyeisi oche na mmemme ahụ, bụ maazị Andrew Anasonye tụụrụ nne na nwa ahụ mmamma maka oke ụbọchị dị òtù ahụ. O mere ka a mara na ọ dịghị mfe mmadụ ịrụ ọrụ ụka ma ọ bụ mmadụ ịdịgide ndụ ruo ahọ otu narị, mee ka a mara na ọ bụ naanị Chineke na-eme ihe niile ahụ, tinyekwuoro ezigbo nri ndị Igbọ Lọọlọ Ezenneka na-eri, bụ nke mere ka ọ gbasie ike. Ọ dụzịkwara ụmụafọ Igbo ka ha na-eri ezigbo ịri e jiri mara ndị Igbo, n'ihi na nke ahụ pụrụ ime ka ahụ sie ha ike ma wezùgakwa ụfọdụ ọrịa dị iche iche.
Na mbụ n'ozi ịtụ mmamma ya, Pope Francis, bụ onye zitere ozi ya site na Rome kelere Chineke n'ihi ndụ Lọọlọ Ezenneka, bụ onye ọ kọwara dịka agụ nwaanyị, ma kpee ekpere ka Ọ gaa n'ihu inye ya ezi ahụike, amamihe, na ngọzị n'ozuzu oke.
N'ajụjụ ọnụ a gbara ya, ya bụ Rev. Fr. Donatus Ezenneka, bụ obere nwa nke Lọọlọ Ezenneka, kọrọ akụkọ banyere ụzọ dị iche iche nne ya sigoro mee ihe gosiri na ọ bụ agụ nwaanyị n'eziokwu. Ọ kpọpụtara ọtụtụ ihe obi ebere na ihe inyerịtara mmadụ aka nne ya mepùtàgoro, nke gụnyere: ime ya ka o were ego niile ndị mmadụ nyere ya ụbọchị e chiri ya ụkọchukwu Oseburụwụa wee ga rụọrọ mmadụ ụlọ, bụ nne o kwuru na ọ rahụrụ n'okporo ụzọ ụbọchị ahụ e chiri ụkọchukwu; otu o si jụ ma kwechiri na a gaghị eresi ndị mmadụ mmiri ha gbàpuru n'ezinaụlọ ahụ eresi, bụ nke ha kpebìgoro na ha ga na-eresi ya ndị mmadụ eresi, tinyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ o megòrò.
Ọ kwara àrịrị banyere enweghị ezi ọnọdụ ahụike ndị mmadụ nọ n'ime ya na ihe nhịa ahụ dị iche iche ndị ha na-agabìga, wee kwe nkwà na ha ga-arụ ihe atọ pụtara ìhè n'aha nne ha, nke gụnyere: ịrụ ebe a ga na-enyòcha ọnọdụ ahụike ndị mmadụ n'obere ego onye ọbụla ga-akwụnwu, iguzòbè atụmatụ ọgwụgwọ a ga na-eme mbugharị n'ụlọ n'ụlọ inye ndị mmadụ ọgwụgwọ, na iguzobe ụlọ ebe a ga na-enyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka site n'ikesàrà ha nri na ihe oriri dị iche iche na mgbe na mgbe.
Mmemme ahụ bụ nke e jiri asọmpi egwu ekere wee malite tupuu ụbọchị ahụ, bụ nke ndị mpaghara Uhuala tuuru ugo na ya.
Ndị dị iche bịara ya bụ mmemme gụnyere: Archbishop nke Onitsha Archdiocese, bụ "Most Reverend" Valerian M. Okeke, nke onye nọchitere anya ya bụ 'Monsignor' Emma Adibe; Bishop Hilary Odili Okeke nke Dayọsiisi Nnewi nke onye nọchitere anya ya bụ ode akwụkwụ Bishọọpụ, bụ "Rev. Fr." Celestine Okonkwo; Eze ọdịnala obodo Ebenator, bụ Igwe Chinaewubeze Ezejiburu; onyeisi ọchịchị nke obodo ahụ, bụ maazị Anthony Okechukwu; Eze ọdịnala obodo Ezinifite, bụ Igwe Samuel Obika, tinyere ọtụtụ ndị ọzọ.